Moments leh saaxiibo 49
Fadlan bixi qeexidda dhimashada iyo in yar si joogta ah sida dhimashada loo gaari karo?
Dhimashadu waa gobolka qofku u ku garto aqoonsigiisa dhammaan gobollada, xaaladaha iyo isbeddelada.
Dhimashadu waa in caqli ahaan lagu gaadhaa iyadoo la adeegsanayo sirdoonka. Dhimashadu laguma gaari karo aaminaad la'aan indho la’aan ah nooc ka mid ah jiritaanka weligeed dhimashada kadib, qofna kuma geli karo xaaladda dhiman la'aanta hadiyad, nimco, dhaxal. Dhimashadu waa in lagu kasbadaa shaqo adag, oo leh caqli.
Dhimashadu waa in la kasbadaa oo la helaa kahor dhimashada, inta lagu gudajiro qofka noloshiisa jir ahaaneed adduunkan jireed. Ka dib dhimashada aan dhiman karin lama gaari karo. Dhamaan maskaxda maskaxda ayaa ku dadaalaya inay dhintaan. Haddii aan dhimashadu la gaadhin dhimashada ka hor, jidhku wuu dhintaa oo maskaxdu waxay ku soo noqotaa dhulka jidh cusub, waqti ka dib iyo ilaa dhimashola'aanta la gaadho.
Jidka aan dhiman karin ayaa ah in qofku joojiyo inuu isku aqoonsado jirkiisa jirkiisa, ama rabitaankiisa iyo shucuurtiisa, shaqsiyaddiisa. Waa inuu isu gartaa waxa leh cilmiga cilmiga; taasi waa, isaga laftiisa. Markuu ka fikiro tan oo uu isku garto, dhimashadu waxay umuuqataa inay dhowdahay. Si taas loogu guuleysto, qofku waa inuu qaadaa tabaha qeybaha iyo waxyaabaha ka kooban wixii uu horay u aqoonsaday. Kaydkaan kadib waa inuu baartaa waxa isaga lagu badali karo, iyo waxa joogto ah. Taas waxa leh isaga oo ku adkaysta, oo aan ku khasbanayn wakhtiga iyo goobta, isaga ayaa iska leh; waxa kale oo dhami waa ku meel gaadh.
Waxaa la ogaan doonaa in lacagta, dhulalka, qadiimka, lahaanshaha, jagada, caan ahaanta iyo wax kasta oo noocee ah ay dunidu aad u qiimeyso, ay ka mid yihiin waxyaabo ku meelgaar ah, iyo qiimo yar ama aan qiimo lahayn midka isku dayaya inuu noqdo mid aan dhiman karin. Waxyaabaha qiimaha leh waa kuwo aan la fahmi karin, ee ma aha kuwa dareenka.
Xuquuqda ujeeddo iyo xaq u fikradaha nolol maalmeedka, dhammaan marxaladaha nolol maalmeedka, ayadoon loo eegayn waxa socodka nolosha uu yahay, ayaa ah waxyaabaha la tirin karo. Maaha nolosha ugu fudud ee keenta natiijooyinka dhakhsaha badan. Nolosha hilib-ka-qaadista, ka fog daryeelada iyo jirrabaadda, ma bixiso dariiqa ama shuruudaha. Midkasta oo dhibaatooyin haysta, tijaabooyin, tijaabooyin, laakiin ka adkaada iyaga oo ku sii jiraya gacanta iyaga oo run u ah ujeedkiisa caqliga leh ee ah mid aan dhiman, si dhakhso ah oo dad yar ayaa yoolkiisa u gaadhi doona.
Dhaqanka maskaxda ee sida weyn waxtarka u leh ayaa ah in qofka wax doonanayaa uu ogaado naftiisa oo ka gooni ah jidhkiisa, kana duwan yahay shakhsiyaddiisa, hamigiisa, shucuurtiisa, dareenkiisa, iyo waxyaabaha ay jecel yihiin iyo silica ay qabaan. Waa inuu ogaadaa inuu isagu gooni ka yahay kana madax bannaan yahay waxaas oo dhan, in kasta oo ay u muuqato inuu taabanayo naftiisa oo mararka qaarna u muuqdo inuu isagu naftiisa yahay. Dabeecaddiisu waa inay ahaato, inuu yahay qof aan xad lahayn, oo ku nool sida aan dhammaad lahayn, weligiis, oo aan lahayn xuduudo iyo kala qaybsanaan waqti, ama tixgelin boos. Taasi waa gobolka aan dhiman karin. Waa inuu caadeystaa inuu arintan u arko mid dhab ah. Markaa wuu ogaan karaa. Inuu jecel yahay taasi kuma filna, iyo inuu ka hadlo, wax aan waxtar lahayn iyo carruurnimo.
Dadku ma yihiin kuwo jecel ama nacayb ah oo ka tarjumaya naftiisa? Hadday haa tahay, sidee loo muujiyaa? Haddaysan ahayn, xaggee bay ka yimaadeen kuwan nacaybka iyo nacaybku?
Ereyga "nafta bini aadamka" waxaa loo adeegsaday si kadis ah waxayna u taagan tahay wajiro badan oo ka mid ah qaybaha aan la arki karin waxa wajigeeda muuqata waxaa loo yaqaan nin. Soul waxaa laga yaabaa inuu macnaheedu yahay xaaladdiisa dhalashada kahor, ama hooska aan macno lahayn-ee qaab dhimashadeed ka dib, ama mabda'a guud ee dunidu ku jirto isaga inta uu nool yahay. Nafta dadku waa halkaan waxaa loo tixgaliyaa inay tahay maanka - mabda'a fikirka, iftiinka miyirka ee jirka. Nacaybka iyo nacaybka dadku ma ahan kuwo ka tarjumaya maskaxdiisa. Waxyaalaha ay jeceshahay iyo kuwa aan jeclayn ayaa ka dhalanaya ficilka maskaxda oo leh rabitaan.
Marka maskaxdu tixgeliso qaar ka mid ah damacyada ayaa jecel iyaga; Rabitaanada kale ee maskaxda ma jecla. Noocaas maanka ah ee ka fikiraya damac, rabitaanku wuu jecel yahay; dabeecadda maanka taas oo ka fog damaca iyo dareenka, rabitaanku wuu neceb yahay. Sidan ayaa loo sameeyaa jeclaanta iyo nacaybka ka dhexeeya maskaxda iyo rabitaanka. Waxyaalaha la jecel yahay iyo nacaybku waxay ka yimaaddaan u ekaanta iyo miyir la'aanta maskaxda iyo rabitaanka. Bini aadamka dadku jecel yahay iyo waxa uu necebyahay ayaa ku dhashay kuna dhashay gudaha dhexdeeda. Kadibna wuxuu muujiyaa waxyaabaha uu jecelyahay iyo waxa uu neceb yahay ee ku saabsan isaga. Waxyaalaha uu jecelyahay iyo waxyaalaha uu jecel yahay ee lagu sameeyay hal nin ayaa ka abuuri doona nacayb iyo nacayb badan ninka uu la kulmo; iyo sababahaas oo haddana ku kalif kara kuwo kale iyo nacaybba dadka kale kuwaas oo iyaguna faafiya waxyaabaha ay jecel yihiin iyo waxyaalaha ay jecel yihiin; si adduunku uga buuxo waxyaabaha jecel iyo nacaybku. Sidan ayaa loo dhihi karaa adduunku waa mid ka tarjumaya waxyaabaha jecel iyo nacaybka aadanaha.
Ma jeceshahay adduunka iyo waxa adduunka ku jira? Mise waan u necbahay iyaga? Waa wax aan waxtar lahayn in la isku dayo in la joojiyo jeclaanta ama nacaybka. Way u roon tahay ninku inuu diido inuu ku xayiro maankiisa waxa uu ogyahay inaysan sax ahayn. Markaa wuxuu diiwaan geliyaa nacayb u qalma. Waxaa ugu wanaagsan ninku inuu jeclaado oo ka fikiro waxa uu ogyahay inay sax tahay oo uu sameeyo. Sidan ayuu ku jecel yahay awooddiisa iyo awooddeeda. Haddii isagu sidan ula dhaqmo oo uu u neceb yahay nafsaddiisa, kuwa kale ayaa sidoo kale samayn doona, sidoo kale duniduna waxaay ku baddali doontaa waxyaabaha ay jeceshahay iyo kuwa aan jeclayn.